Vanhu mukati mavhiripu anogona kutamba mitambo.
Kune mhando dzakasiyana dzemitambo yekusarudza uye dzinogona kukwikwidza mumitambo mune mimwe yemitambo. Enderera kuverenga kuti udzidze zvimwe nezve zvimwe wiricheya mitambo, inozivikanwawo semitambo inochinja.
Basketball ndeimwe yemitambo inozivikanwa kwazvo wiricheya vanoshandisa.
Mitemo inoramba yakangofanana kusara kwekudonha kaviri, yakashandurwa apo vatambi vanongobvumidzwa kubata mavhiri avo kaviri pakati pekukwesha bhora. Vatambi vanotamba mukati wiricheya yemanyorero aine akakosha mavhiri anovabvumidza iwo kuve neakawanda kutonga uye zvinoita kuti zvinyanye kuoma kuva tilt pamusoro.
Mimwe mitambo inozivikanwa uye yanga iriko kwenguva yakareba ndeyeTennis nekuda kwaBrad Parks akaitanga muna1970.
Nekudaro, uyu mutambo hausi kufambidzana kune vazhinji nekuti adaptive michina inodiwa kuitira maneja uye chengetedza mwero. Iyo midziyo inofanirwa kunge iine chimiro chakakura kuti ive nechokwadi chekuti inoshanda nemazvo. Mitemo yacho inoramba yakadaro uye kunze kwekukwirisa kaviri padivi remutambi.
Mimwe mitambo ine ngozi zvakanyanya kupfuura mimwe asi ichiramba ichizivikanwa seMotocross.
hwiricheya vashandisi vanokwanisa kuita zvidimbu zvakasiyana senge zvinoita varikwikwidzi veBMX uye vanokwanisa kukwikwidza kutenderera pasirese. Zvimwe wiricheya yakakurumbira mitambo iri kukurumidza kufamba nechikepe uye vanokwikwidza kumvura vachikwikwidza simbi zvakare. Kumhanya nechikepe kunosanganisira kudzora inochinjika chikepe, mumwe anofanirwa kupfeka a chipfeko cheupenyu uye kutora zvinodiwa mubhodhi kuti uyambuke gungwa. Kusvetuka kwemvura, kune rumwe rutivi, kunoda zvakanyanya wheelchair yakashongedzwa iyo inobvumidza iyo kutsvedza pamusoro pemvura sezvo ichidhonza kuseri kwechikepe nekuwedzera kwekubatirira. Zvakafanana nemvura yekuchaya kune kuchando kwechando uko kwakafanana midziyo inoshandiswa asi pachando inobvumira vakwikwidzi kuratidzira hunyanzvi hwavo.
hwiricheya Mujaho wepamusoro mukwikwidzi mutambo uko vanoshandisa wiricheya iva netirakisi yakaita se wiricheya aine akakosha mavhiri anovabvumira kuti vasvike kumusoro kumhanya. Vanoshandisa muviri wepamusoro simba kuzvimanikidza kuyambuka nzira kumatunhu akasiyana. Zvichienderana nemakwikwi akapinda zvipingaidzo zvinosiyana uye zvinosanganisira ramp, kukwira njanji, uye kudzikama.
Mimwe mimwe mitambo yakafanana ne wiricheya basketball zvakadaro kusiyanisa kwakawanda kuri wiricheya bhora uye rugby.
hwiricheya nhabvu inotambwa padare rebasketball uye inosanganisira goalie uye vatambi vashanu muchikwata chimwe nechimwe. Wiricheya bhora ine mubatanidzwa we basketball uye handball mitemo. Rugby, kune rumwe rutivi, ine mubatanidzwa weHockey, volleyball uye basketball mitemo. Yakatanga kugadzirwa muna 1976 uye iyo wiricheya rugby federation yakavambwa mu1993.
Kune vazhinji mhando of wiricheya mitambo.
Mimwe yacho inoridzwa mukati nyanzvi yemawiricheya nepo zvimwe zvingaitwe kushandisa mawiricheya emagetsi. Ikoko kune makirabhu mazhinji nemubatanidzwa wakatsaurirwa kutsigiro yemitambo inoenderana uye kuziva. Tarisa uone kana paine chero maleigi emuno padhuze newe nhasi.
Kuverenga nezve nhoroondo ye hwiricheya mitambo, tinya iyi link:
Ndeipi Mitambo Iyo Vanhu Vanogona Kutamba mairi Mawiricheya: https://www.karmanhealthcare.com/what-sports-can-people-in-wheelchairs-play/